အဘိဓမ္မာ ဌာန - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
စတင်တည်ထောင်သူ နီစံ (အနီ)
-အဘိဓမ္မာ ရေးရာ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ရန်
ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ ရိုးရိုးသင်တန်း သဂြိုလ်ကိုးပိုင်း ဇယား
ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ ရိုးရိုးသင်တန်း ပထမအဆင့် (စိတ်ပိုင်း စေတသိက်ပိုင်း ပဏိက်းပိုင်း)
ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ ရိုးရိုးသင်တန်း ဒုတိယအဆင့် မှတ်စု (ဝီထိပိုင်း၊ ဝီထိမုတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း)
ဓမ္မဗျူဟာ အဘိဓမ္မာ ရိုးရိုးသင်တန်း တတိယအဆင့် မှတ်စု သမုပစ္စည်းပိုင်း ပစ္စည်းပိုင်း ကမ္မဠာန်း ပိုင်း)
မစောသဇင်ရဲ့ တရားအားထုတ်နေစဉ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော တွဲမိသည့် စေတသိက်အလုံးကလေးများမေးခွန်းအား လက်လှမ်းမှီသလောက် ခြုံငုံပြီးတင်ပြခြင်း
စတင်ရေးသားခဲ့သူ nyansoe. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ nyansoe Jul 12, 2013.2Replies2Likes
စိတ်သည် လက်ဖျစ်တချက်တီး ကာလ၌ ပင်လျှင် ကုဋေတစ်သိန်းဖြစ်ပျက်နေသည်ဟု ဘုရားဟောရှိပါသည်။စေတသိက်သည် စိတ်နှင့် အတူဖြစ် စိတ်နှင့်အတူချုပ် သောကြောင့် စိတ်ဖြစ်တိုင်း စေတသိက်တို့ အမြဲဖြစ်နေပါမည်။ တရားအားထုတ်နေစဉ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသောစိတ်တို့သည် မိုးကုတ်ဆရာတော်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ogyis@m ရဲ့ "ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရာတွင်" ဆွေးနွေးချက်ကို မှတ်ချက်ရေးသားခြင်း
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ nyansoe Jul 11, 2013.0Replies0Likes
စေတနာဟူသော အကြောင်းပစ္စည်းတရားသည်သာ ဆိုင်ရာအကျိုးပစ္စယုပ္ပန် တရားတို့အား သဟဇာတ ကမ္မသတ္တိ၊ နာနာက္ခဏိက ကမ္မသတ္တိ၊ တို့ဖြင့် (ဖြစ်သင့်သလို) ဖြစ်တည်စေမှု ကျေးဇူးပြုနိုင်သောကြောင့်" စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံဝဒါမိ" စေတနာသာ ကံဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဟောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ogyis@m ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို မှတ်ချက်ရေးသားခြင်း
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ nyansoe Jul 8, 2013.0Replies0Likes
ဇောတွေဟာ များသောအားဖြင့် (ယေဘုယျအားဖြင့်) ၇ကြိမ်စောပါသည်။ ၈ ကြိမ် ၊ ၉ ကြိမ် မစောနိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ဇ၀န နိယာမကြောင့်ဟု ပြေရပါမည်။ ဥပမာကို ကာမဇောစောပုံနှင့် ပြသပါမည်။ ကာမဇောများတွင် ပဉ္စာရုံတို့၌ ပဉ္စပသာဒ ထင်လာသောအခါ စိတ္တက္ခဏ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
စတင်ရေးသားခဲ့သူ ko nyo. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ နီစံ (အနီ) မေ 4, 2012.2Replies2Likes
အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးထဲမှ လောဘမှုစိတ်၈ပါးko nyo မှ April 30, 2012 12:26am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယ္ခုတင်ပြချက်သည် ဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်နှင့် ဆုထူးပန် ဆရာဟန်အဘိဓမ္မာ စာအုပ်များမှကောက်နုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
စတင်ရေးသားခဲ့သူ ko nyo. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ 3hugiiftwckx6 မေ 2, 2012. 1 Reply 1 Like
လောဘမှုစိတ် ၈ ပါးကိုတင်ပြပြီးဖြစ်ရ်ျ ကျန်ဒေါသမှုစိတ် ၂ပါး၊မောဟမှုစိတ်၂ပါးကိုထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါသည်။ဒေါသမှုစိတ်(ဒေါသမှုလဖြစ်သောစိတ်) -၂ပါး ၁။ ဒေါမနဿသဟဂုတ် ပဋိဃသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက စိတ်-၁၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တကွဖြစ်သော၊ပဋိဃသမ္ပယုတ် အမျက်ဒေါသနှင့်ယှဉ်လျက်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
အဘိဓမ္မာ mp3 များဒေါင်း၇န်
ဆွေးနွေးချက်စတင်ရေးသားသူ နီစံ (အနီ) Apr 27, 2012.0Replies 1 Like
အဘိဓမ္မာ ဌာန သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဦးအောင်ကိုး သည်ှဧပြီ 29, 2012 က 8:24pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအဘယ့်ကြောင့် ၃၁ ဘုံ ထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာကြောင့် တာဝတိံသာံနတ်ပြည်မှာ သာဟောရခြင်းအကြောင်းကိုသိချင်ပါသည်။ မယ်တော်မိနတ်သားရှိတဲ့နေရာမို့ အဲဒီမှာဟောတာလို့ တော့မှတ်သားဘူးပါသည်၊ အခြား reason များရှိအုံးမလား၊ တာဝတိံသာနတ်တွေသာ အခြားဘုံသားတွေထက် ပညာညဏ်ထက်မြက်လို့ လား၊ ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြည့်တာပါခင်ဗျာ၊ ကျနော်လည်းအဘိဓမ္မာကိုလေ့လာနေဆဲပါ။
နီစံ (အနီ) သည်ှဧပြီ 28, 2012 က 10:36pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဒီနေရာမှာ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာတွေ တစုတစည်းထဲဖြစ်ဖို့နဲ့..မသိတာတွေ မရှင်းတာတွေ အတူတူ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဒီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ထားခြင်းပါ
ဆွေးနွေးမှုဘလော့တခုတင်မယ်ဆိုရင်..Add aDiscussion ဆိုတဲ့နေ၇ာကနေ စပြီး
တစ်ဥိးကဆွေးနွေးမှုထည့်သွား၇င် ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်များက ၀ိုင်းဝန်းဖတ်ရူမသိတာဆွေးနွေး
ko nyo သည်ှဧပြီ 28, 2012 က 3:32pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကျွန်တော်အလွန်ဖြစ်စေချင်သော အဘိဓမ္မာလေ့လာစရာနေရာလေးတခု တွေ့လိုက်ရလို့ ကျေနပ်ရပါတယ် ကျွန်တော်လဲလေ့လာရင်းသိသမျှလေးတွေကို ပြန်မျှဝေလိုပါတယ် ကျွမ်းကျင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီစေချင်ပါသည်၊ အဘိဓမ္မာကို လေ့လာခြင်းအကျိုးများစွာရရှိနိင်ပါသည်။ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ပြီးမှ ဘာတွေအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သိရှိလာပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ဥာဏ်တော် ဂုဏ်တော်ကိုသိရှိနိင်ပြီး လူအချင်းချင်းဘာကြောင့်ကန်တော့ရှိခိုးရတာလဲ လူသားတယောက်ကို ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာဘာကြောင့်လဲ သိမြင်လာမယ် ဘာသာကြီး၎ဘာသာထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသိလာပါမယ် အဆုံးစွန်သောဘဝမှာ ဥာဏ်ပညာထက်မြက်သောဥာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသော ရဟန္တာအဖြစ်ကို အကျိုးပြုပါတယ် ဒါကြောင့် ဒီလေ့လာစရာအခန်းကိုပြုလုပ်ပေးသော အနီကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်